पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७८ आषाढ १८ गते (सन् २०२१ जुलाइ २ तारिख) शुक्रबार – Rastriya Yuvajagaran Nepali News
पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७८ आषाढ १८ गते (सन् २०२१ जुलाइ २ तारिख) शुक्रबार
आज : गोरखकाली पूजा, त्रिशुल यात्रा, भलभल अष्टमी, खेलकुद पत्रकार दिवस ।
मा प्रकाशित | जीवनशैली, धर्म/संस्कृति, राशिफल
पुर्पुरोमा जे लेखिए पनि भाग्यसँगै कर्म गरौं । यतिखेर सबै भुगोल र समुदायमा कोरोना भाइरसको असर देखिइरहेको छ । देशभर लागेको निषेधाज्ञा केही खुकुलो भए पनि कोरोनाको प्रभावबाट बच्ने उपायहरु स्वास्थ्य मापदण्ड, सामाजिक दुरीका साथ सचेत भई आफू सुरक्षित रहे परिवार, समाज र देश सुरक्षित रहन्छ भन्ने हेक्का सदैव राखौं ।
मेष – सुखसुविधाको वस्तुमा धन खर्च हुनेछ । सामान हराउने डर रहला । ग्रहगोचरको प्रभावस्वरुप हासविलासमा आकर्षण बढ्ला । भागदौड बढ्नेछ । खेलकूद भ्रमणमा रुचि बढ्नेछ । शैक्षिक र रचनात्मक काममा आंशिक प्रगति मिल्नेछ । नियमकानूनलाई ध्यानमा राख्नुपर्ला । विवादमा नपर्नु र जोखिमप्रति सचेत रहनु हीतकर होला । अरुको भर पर्नु उचित नहोला ।
बृष – सुख आनन्द बढ्नेछ । आरोग्यता बढ्ला । अन्नधन र आयस्रोत बढ्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । आफन्तसुख बढ्नेछ । दौडधुप भने भैरहला । व्यर्थको झण्झटबाट छुटकारा मिल्ला । यात्रा हुने, महत्वपूर्ण काम बन्ने सम्भावना रहला । आर्थिक पक्षमा सुधार हुनेछ । विशेषगरी पारिवारिक क्षेत्रसित सम्बन्धित काम बन्नेछ । आफ्नै बल विवेकले काम गर्नु उचित रहनेछ । मनोकूलको काम बनेर मन प्रशन्न हुनेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ ।
मिथुन – भाग्योदय हुनेछ । आँट उत्साह बढ्नेछ । साहसिक कार्यमा रुचि बढ्ला । उच्चाधिकारीको सहयोग प्राप्त हुनेछ । सुख समृद्धि बढ्ला । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । लेखन प्रकाशनसित सम्बन्धित काम बन्नेछ । आफन्तको साथ मिल्नेछ । कुनै प्रकारको जोखिममा नपरी काम गर्नु उचित हुनेछ । रोकिएको काम बन्ला । ख्याति फैलिनेछ ।
कर्कट – मिठो भोजन मिल्नेछ । आयस्रोत सुख समृद्धि बढ्नेछ । आर्थिक प्रगतिसँगै यश गौरवमा पनि बढोत्तरी हुनेछ । वार्तामा सफलता मिल्नेछ । लेखन प्रकाशनसित सम्बन्धित काम, यात्रापरक काम आदि क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । गीतसंगीत रसराग प्रेममा सफलता मिल्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य बन्नेछ । भोगविलासमा रुचि रहनेछ ।
सिंह – कठोर मिहीनेतले सफलता प्राप्त होला । सम्मान मिल्नेछ । शुभ र भाग्यबर्द्धक काममा केन्द्रित रहनु हीतकर होला । ऋण रोग र शत्रुलाई जित्ने सामर्थ्य वृद्धि हुनेछ । आफन्तको सहयोग समर्थन मिल्नेछ । समस्याको समाधान होला । भोग विलासको अवसर भेटिएला । विवादमा पर्नु र अरुको भरमा बस्नु उचित हुने छैन ।
कन्या – आयस्रोत बढ्नेछ । आरोग्यता रहला । साहसिक काममा आकर्षण बढ्नेछ । यात्रामा सफलता प्राप्त होला । खेलकूदमा रुचि बढ्ला । कलात्मक र रचनात्मक क्षमता बढ्नेछ । विवेक लगाएर योजनानुसार काम गर्नु उचित हुनेछ । सन्तान सुख बढ्नेछ । शत्रुलाई जित्ने क्षमता बढ्नेछ । कर्मपथमा सफलता मिल्नेछ । विलासमा आकर्षण बढ्ला ।
तुला – कार्ममा सफलता मिल्नेछ । आफन्त सुख बढ्नेछ । उच्चाधिकारीको सहयोग मिल्नेछ । लापर्वाही नगरी योजना बनाएर काम गर्नु बेस रहला । आर्थिक पक्ष बलियो बन्नेछ । सुख समृद्धि बढ्नेछ । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । समस्याको समाधान गर्नुहुनेछ । गीतसंगीतमा आकर्षण बढ्नेछ ।
वृश्चिक – शुभता बढ्ला । मनोकूलको काम बन्नेछ । आयस्रोत बढ्ला । रोकिएको धन उठ्नेछ । यश वर्चश्व रहला । दायित्व पूरा गर्नुहुनेछ र नयाँ दायित्व पनि प्राप्ति हुनेछ । यात्रापरक कार्य बन्नेछ । साथीभाइको साथ मिल्नेछ । आशा उत्साह पनि वृद्धि हुनेछ । ऐश्वर्य बढ्नेछ । मिठो भोजन खान पाउनु हुनेछ । हांसविलासमा रुचि बढ्नेछ ।
धनु – लगानी र खर्च बढ्नेछ । खेलकुद भ्रमण हांसविलास आदिमा आकर्षण बढ्नेछ । लापर्वाही नगरी योजना र बजेट बनाई काम गर्नु हीतकर होला । स्वास्थ्यमा ध्यान राख्नुपर्नेछ । ऐनकानूनलाई सम्मान गर्नु हीतकर होला ।
कुम्भ – सुख आनन्द बढ्नेछ । यात्रापरक काम बन्नेछ । घरपरिवारको स्थिति अनुकुल रहनेछ । रसरागमा रुचि बढ्ला । मान महत्व बढ्नेछ । सार्वजनिक कार्य आदिमा आकर्षण बढ्नेछ । योजना र बजेट बनाई काम गर्नु उचित हुनेछ । साहसिक कार्यमा प्रवृत्ति बढ्ला । शुभ समाचार मिल्नेछ । मिठो भोजन खान पाउनु हुनेछ । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । रोकिएको काम बन्नेछ ।
मीन – विशेषगरी शारीरिक र आर्थिक कार्यमा सफलता मिल्ला । शुभ काम बन्नेछ । आर्थिक पक्ष बलियो बन्नेछ । सुख वृद्धि हुनेछ । आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । विजयश्री मिल्नेछ । हरेक प्रकारले सुख सौभाग्यमा वृद्धि हुनेछ । लगानी उठ्ला । अन्नधन बढ्नेछ । यात्रा होला । ख्याति फैलिनेछ । प्रेममा सफलता प्राप्त होला । इष्टमित्र र सन्तान सुख बढ्ला ।
पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७८ श्रावण १० गते (सन् २०२१ जुलाई २५ तारिख) आइतबार
पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७८ श्रावण ९ गते (सन् २०२१ जुलाई २४ तारिख) शनिबार
पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७८ श्रावण ०८ गते (सन् २०२१ जुलाई २३ तारीख) शुक्रबार
इटहरीमा छुट्टाछुट्टै चोरीको घटनामा संलग्न दुई जना पक्राउ